HERO OF MYANMAR: တိုင်းပြည်က ‘သာဓု’ သုံးကြိမ် ခေါ်နိုင်ရေး
[16:58 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
၂၀၀၇ ခုမှသည် ယခုအချိန်အထိ လေးနှစ်အတွင်း ဆယ်ကြိမ်မြောက် အဖြစ် အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ တနင်္လာနေ့က တွေ့ဆုံ၍ စကား ပြောခဲ့ကြသည်။ (ယခု တင်ပြချိန်တွင် နောက်ထပ် တွေ့ဆုံမှု ထပ်ဖြစ်နေသည်ဟု သိရသည်။)
ထို့နောက် အစိုးရသစ်၏ ပထမဆုံးအကြိမ် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် အခြား ကိစ္စများနှင့်အတူ နောက်ဆုံး အကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရလဒ်ကို မီဒီယာက စစ်ဆေး မေးမြန်းခံသည်ကို တွေ့ ရသည်။
ဦးအောင်ကြည် ဖတ်ပြသော တိုတောင်းသော ကြေငြာချက်ပါ အချက် လေးချက်ကို တစ်ခုချင်း ဆန်ကာချ ကြည့်သောအခါ - အမှတ်စဉ်အလိုက် -
၁- ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်း ပေးကြတော့မည်။
(ယခင်က နှစ်ဘက်စလုံး ကိုယ့်ဆန္ဒကိုသာ ပြည်သူ့ဆန္ဒ အဖြစ် ပုံဖေါ်ခဲ့ကြသည်၊ ယခု ပြည်သူ့ ဆန္ဒကို ကိုယ့်ဆန္ဒ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ ခံယူလာကြပြီဟု ထင်ရသည်။)
၂- ဒီမိုကရေစီရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးများကို နှစ်ဘက် လက်တွဲ၍ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်။
(ယခင်က ဤလက်တွေ့ လုပ်စရာများကို နောက်တန်း ပို့ထားပြီး အာဏာ၌ တရားဝင်မှု (legitimacy in power) အပေါ် အငြင်းပွား ခဲ့ကြသည်။ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ တောင်းယူ၊ တိုက်ယူ၍ ရသော နေရာများ ရှိသလို ကိုယ်တိုင် လုပ်ယူမှ (တည်ဆောက် ယူမှ) ဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေများလည်း ရှိသည် ဆိုတာကို သဘော ပေါက်လာကြပြီဟု ယူဆရသည်။)
၃- ပဋိပက္ခဖြစ်မည့် သဘောထားတွေ ရှောင်ရှားမည် - အပြုသဘောကိုဦး တည်မည်။ (ဤအချက်ကို ထပ်ရှင်းလင်း နေစရာမလို)
၄- ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆက်လုပ် သွားမည်။ (ရှင်းစရာမလို)
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည် ယခင် စစ်အစိုးရများက ချန်ထားရစ်ခဲ့သော ပြဿနာကြီးများကို အမွေ ဆက်ခံ ထားရသည်။ စာရင်းချပြရလျှင် နှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိသည်။
၄င်းတို့မှာ နိုင်ငံတော် အာဏာ၌ တရားဝင်မှု ပြဿနာ (legitimacy in state power) မှ မြစ်ဖျားခံ၍ လာသော ပြဿနာများ - ပြည်တွင်းစစ်/ လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများ - နိုင်ငံတကာ၏ ၀ိုင်းပယ်ထားမှုနှင့် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ ဆန်ရှင်
ဒုတိယ - ခေတ်အဆက်ဆက် ညံ့ဖျင်းသော အုပ်ချုပ်မှု (poor governance) ကြောင့် ဖြစ်ရသော ပြဿနာများ (ဥပမာ လူထုဆင်းရဲ မွဲပြာကျမှု၊ ၀န်ထမ်းထု အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှု၊ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယား ဖေါင်းပွမှုနှင့် မထိရောက်မှု (bloated and inefficient bureaucracy) ပညာရေး၊ ကျမ္မာရေး ယိုယွင်းနိမ့် ကျနေမှု၊ အများ ပြည်သူ့ ကိုယ်ကျင့် တရားများ ပျက်စီးမှု (public morality decay)၊ စစ်တပ်နှင့် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းဝင်များ၏ အာဏာ အလွဲသုံးမှု (abuse of power) နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆုပ်ယုတ် ပျက်စီးလာနေမှု စသည် စသည်။ ပညာရှင်များက မြန်မာကို အာဖရိကရှိ ကွန်ဂို ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ Democratic Republic of Congo – DRC နှင့် တတန်းတည်း ထားကြသည်။)
ဤစိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရန် မွေးဖွား လာသော အစိုးရသစ်သည် အစကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ခေါင်းဆောင်သော ‘နအဖ’၏ နောက်ချန်တပ် (Rare guard) အဖြစ် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ပရိသတ်က ရှုမြင်နေတာကို ခံရသည့်အပေါ် ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုများကြောင့် ပိုဆိုးသွားခဲ့ကာ နိုင်ငံတော် အာဏာ၌ တရားဝင်မှု ချို့ယွင်းချက်ကို ကုစားနိုင်သင့် သလောက် မကုစားနိုင်ခဲ့ချေ။
ရလဒ်မှာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ်အား ဒီမိုကရေစီ ကမ္ဘာကြီးက ယခင် နအဖကို ဆက်ဆံသည့် အတိုင်း ပုံစံ မပြောင်းဘဲ ထားကာ ဆက်ဆံနေသေးသည့် အချက် ဖြစ်သည်။ အစိုးရသစ်၏ ခေါင်းဆောင်များကို မည့်သည့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးများကမျှ ဖိတ်ကြားတာ မတွေ့ရသေး။ အနောက်ကမ္ဘာမှာ ၀င်ဆန့်ဘို့မဆို ထားနှင့် မိမိဒေသတွင်းမှ ရထိုက်သင့်သော အလှည့်ကျ ASEAN ဥက္ကဌရာထူး ရယူနိုင်ရေးကိုပင် မနည်း အားထုတ်နေရသည်။
ရတက် မအေးစရာ အကောင်းဆုံး ကိစ္စမှာ ပြည်တွင်းစစ် ပြန်လည် ကျယ်ပြန့်လာမည့် အရေးဖြစ်သည်။ အစိုးရသစ် တက်လာလျှင် ဗဟိုအစိုးရနှင့် မိမိတို့အကြား ပြဿနာကို ရပ်တည်မှုသစ် ရှုဒေါင့်သစ် (new attitude) မှ ဖြေရှင်းရန် စိတ်ရည်သန် ထားကြသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများသည် အစိုးရသစ်ကို သံသယရှိဆဲ ဖြစ်သဖြင့် မိမိတို့၏ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက် အဟောင်းများကိုပင် ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင် ထားနေကြသည်။
ထို့ကြောင့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး စေတနာ (political will) ကို သံသယ ရှိစရာမလိုဟု ပြောနိုင်လျှင်ပင် သူအမွေခံ ထားရသည့် ပြဿနာကြီးများကို ထိထိ ရောက်ရောက်နှင့် အပြီး လက်စသပ်အောင် ဖြေရှင်းပေးရန်မှာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးမှ ပြည်သူလူထု အစိတ်အပိုင်း အားလုံး၏ ပါဝင်မှု (participation) ကို ရအောင် ယူနိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်။
ပြည်တွင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အခြေအနေများအရ အစိုးရသစ်ကသာ မှန်မှန် ကန်ကန် အသုံးချနိုင်စွမ်း ရှိလျှင် အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အလွန် အဖိုးတန် အသုံးဝင်သော ပြည်သူ ပြည်သား တစ်ဦး ဖြစ်နေသည်။
(She is the most valuable asset the country owns at this moment.)
အနောက် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးများက သူမကို တန်းတန်းစွဲ ဖြစ်နေသလို၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များကလည်း- မည်မျှပင် စေတနာ မှန်ပါသည် ဆိုလင့်ကစား သူတို့နှင့် သွေးမြေကျ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ဘူးသည့် သူများထက် စာလျှင် - ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ သမီးအား - သဘာဝကျစွာပင် - ပို၍ ယုံကြည်မှု ရှိနေကြသည်။
ပြည်သူလူထု၏ သဘောထားကိုမူ အထူး ပြောစရာ မလိုတော့။
ဤမျှ ‘ထီးလိုမင်းလို’ ဖြစ်နေသောသူ တစ်ဦးကို အသုံးချ၍ ပြဿနာများကို မဖြေရှင်းချင်ဘူး ဆိုလျှင် လွယ်တာကို တမင်ခက်အောင် လုပ်ချင်တာက လွဲ၍ အခြား ဘာမှမဖြစ်နိုင်။ သည့်ထက်ပို၍ ပြောရလျှင် တိုင်းပြည့် အကျိုး သာမက လက်ရှိ အုပ်စိုးနေသူများ၏ လူတန်းစား အကျိုးစီးပွား အတွက်ပါ မလိမ္မာရာ ကျလိမ့်မည်။
အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁၉၈၈မှသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလအထိ ၂၂ နှစ်တာ အတွင်း မြန်မာ စစ်အာဏာပိုင်များက လှမ်းသော နိုင်ငံရေး ခြေလှမ်း ဟူသမျှကို အကုန် သိမ်းကျုံး ဆန့်ကျင် ရပ်တည်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်လင့် ကစား မကြာသေးမီက သူမ အတိအလင်း ထုတ်ဖေါ် ပြောဆို လိုက်သော နိုင်ငံရေး စောင့်ထိန်းမှု တစ်ခုကို အစိုးရသစ်က သတိပြုမိခဲ့ပုံရသည်။ ၄င်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရေး ခရီးတလျှောက် ပဋိပက္ခများ၊ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်များကို အင်အားသုံး၍ အကြမ်းဖက်၍ ဖြေရှင်းခဲ့ကြ၊ ရယူခဲ့ကြသည်။ ထိုဓလေ့ (tradition) ဆိုးကို သူမ အနေဖြင့် အဆုံးသပ်ချင်သည်။ (သူမ၏ စကားလုံး အတိအကျ မဟုတ်၊ နားလည် မိသလို အဓိပ္ပါယ် ကောက်ယူ ထားပါသည် - မြန်မာသံတော်ဆင့်)
ဤသည်မှာ သူမဘက်က စောင့်ထိန်းမည့် အခြေခံအကျဆုံး နိုင်ငံရေးသီလ သိက္ခာပုဒ်ကို ကြေငြာလိုက်ရာ ရောက်သည်။ ဤအချက်အားသူမနောက်ဆုံး အကြိမ် လွတ်မြောက်လာစက တိုင်းပြည်အကျိုး အတွက် မည်သူနှင့်မဆို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုသော ပြောဆိုချက်နှင့် ပေါင်းစပ် လိုက်သောအခါ သူမနှင့် လက်တွဲ၍ နိုင်ငံရေး လုပ်ကြည့်ရန် လုံလောက်သော အကြောင်း ပေါ်ပေါက် နေသည်။
(အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာဆက်လုပ်မလဲ - စစ်အစိုးရ ဘာဆက်လုပ်မလဲ ရှု)
သူသမ္မတ ဖြစ်လာသည်မှ ယခုအချိန်အထိ မူဝါဒရေးရာနှင့် ပါတ်သက်၍ ဦးသိန်းစိန် ပြောခဲ့သမျှတို့ အနက် အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခုမှာ အမျိုးသားရေး အတွက် မည်သည့် နိုင်ငံရေး အင်အားစုများနှင့် မဆို တူတာတွေ တွဲလုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားမည်/ ကြိုးစားကြရန် ဆိုသော အချက်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုတိုင်းတွင် အပေးအယူရှိစမြဲ ဖြစ်ရာ ယခုကိစ္စတွင်လည်း ရှိရမည်မှာ သေချာသည်။ ဖြစ်သင့်သည်မှာ ယခု အလိုအလျှောက် စမိခဲ့ကြသည့် နည်းအတိုင်း ကိုယ်လိုချင်တာကို စမပြောဘဲ ကိုယ်ပေးနိုင်တာက စ၍ ပြောကြရန် ဖြစ်သည်။
ကိုယ်လိုချင်တာကို အမိအရ ပြောခြင်းသည် တောင်းဆိုချက် နိုင်ငံရေး (politics of demand) ဖြစ်၍ NLD က တစ်လျှောက်လုံး လုပ်လာသောနည်း ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်မှု အတိုင်းအတာမှာ အားလုံး အသိဖြစ်သည်။ တောင်းဆိုချ က်တစ်ခု သည်တဘက်က ပေးနိုင်လောက်တာ ဖြစ်နေသည့်တိုင် ၄င်းနှင့်ကပ်၍ ပါလာသော ထိပ်တိုက်ပုံသဏ္ဍန် (confrontational posture) ကြောင့် တဘက်သား၏ စိတ်ကို တင်းမာ သွားစေသည်။ လျှော့ပေးလိုက်ရင် (သူ့ /ကိုယ့်) ပရိသတ်က ဘယ်လို ထင်ကြမလဲ ဆိုတာကို ထည့်တွက် လာကြသည်။
ထို့ကြောင့် NLD ဘက်က တစ်လျှောက်လုံး တောင်းဆို လာခဲ့သော တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးကို NLD က လိုချင်သော ပုံစံဖြင့် မဟုတ်ဘဲ အစိုးရက ပေးခဲ့သည်။ သူမအား (စစ်)အစိုးရ အဆက်ဆက်က ဆက်ဆံခဲ့သည့် အနွယ်တော်ဝင် အဆင့်အတန်းမျိုး (Royalty status) ကိုကြည့်လျှင် ယခု လုပ်နေသော သမိုင်းဝင် ဆွေးနွေးမှုကြီး အောင်မြင်သွားလျှင်အခါ အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မလွှဲမသွေ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် အခမ်းနား တွဲတက်ကာ နိဂုံးပေးချုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ အပိုအလို မရှိသော လုပ်ထုံး လုပ်နည်း (protocol) ဖြစ်သည်။
ပြဿနာမှာ အစိုးရသစ်သည် အမျိုးသားရေး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကူအညီကို ယူဖြစ်အောင် ယူမိဘို့ ဖြစ်ပြီး သူမဘက်မှလည်း အစိုးရသစ်က မိမိတို့နှင့် လက်တွဲလာ လုပ်ကိုင်အောင် တတ်နိုင်သမျှ ပျော့ပြောင်း ပေးရန် ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ်က တိုက်တွန်းနေသော ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေးများကို အလေးအနက်ထား ချင့်ချိန် ကြည့်သင့်သည်။ ပါတီကို မှတ်ပုံမတင်ခြင်း - ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ် မှောက်ခြင်းများသည် ယခင်နအဖ စစ်အစိုးရကိုတိုက် ခဲ့သည့် တိုက်ကွက်များ ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်တာ မမြင်တာထား - တိုက်ပြနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ်၏ ဖြစ်တည်မှု သဘာဝကို ဥပမာပေးရလျှင် ဖယောင်းတိုင် နှစ်တိုင် မီးကူးသည့် သဘောမျိုးဟု ပြောရမည်။ ဖယောင်းတိုင်သစ်က မီးသည် ဖယောင်းတိုင် ဟောင်းက မီးကို ကူးယူထားသည် ဖြစ်ရာ အဟောင်းနှင့် အကြောင်း မကင်းသည်မှာ မှန်သော်လည်း ဒါအဟောင်း သက်သက်ပဲဟု ပြောလျှင်မမှန်ပေ။
အစိုးရသစ်တွင် ယခင် စစ်အစိုးရတုံးက လူတွေအများကြီး ပြန်ပါနေသည်မှာ မငြင်းနိုင်သော အချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တချိန်တည်းတွင် လူမပြောင်း သော်လည်း မူပြောင်းဘို့ အားထုတ်နေသည့် ဖြစ်စဉ်ကြီးကို မျက်နှာလွှဲထားလျှင် နိုင်ငံရေးအရ လက်တွေ့ မကျ။
ထို့ကြောင့် မှတ်ပုံပြန်တင်ပါ - ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပါဟူသော တိုက်တွန်းချက်ကို မိမိတို့ကို ကျုံးသွင်း နေတာဟု တွေးနိုင်သလို တဘက်ကလည်း အခြေအနေသစ်နှင့် ကိုက်ညီအောင် မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ဖန်တီး (reinvent) ခွင့်ပေး နေသည်ဟုလည်း ယူဆ၍ ရကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် သူမအနေဖြင့် ဘက်ပေါင်း စုံပါဝင်သော အယူ/အပေး တွက်ချက်မှု (a comprehensive cost benefit analysis) တစ်ခု လုပ်ရပေလိမ့်မည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံသစ်ကို NLD က လက်ခံသေးတာ မဟုတ်ဘူးဟု ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပါတ်လည်နေ့က သာဓု ကျောင်းတိုက်တွင် အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့သည်။ ဤသည်က အများထင်သလို လက်ရှိဆွေးနွေးပွဲကို ထိခိုက်စေလိမ့်မည် မဟုတ်။ အကြောင်းမှာ လက်ခံခြင်း/ မခံခြင်းသည် ဥပဒေသစ်၏ အတည်ဖြစ်မှုကို မထိခိုက်နိုင်တော့။ ဥပမာပြောရလျှင် ဘားရက် အိုဘားမားသည် သူ့ကို မဲမပေးဘဲ ဂျွန်မက္ကိန်းကိုသာ မဲထည့်ခဲ့သော ရီပတ်ဘလီကန် ပါတီဝင် လူထုများ အတွက်ပါ သမ္မတ ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ဥပဒေသစ်ကို ပြင်ချင်လျှင်လည်း လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်အောင် လာကြပါဟု သမ္မတက အားလုံးကို ကမ်းလှမ်းထားသည်။ နိုင်ငံရေးတွင် ပြန်ပြင်၍ မရတော့သည့် အရာဟူ၍ ဘယ်အရာမှ အရာမျှမရှိ။
မြန်မာလူမျိုးများတွင် လူကိုခင်လျှင် မူကို ပြင်တတ်ကြပြီး လူကို မုန်းလျှင်မူကို သုံးတတ်သည့် အကျင့်ဓလေ့ အားကောင်းသည်။
နောက်ဆုံး စဉ်းစားရန် တစ်ချက်မှာ အစိုးရ တိုက်တွန်း နေသလို မှတ်ပုံပြန်တင်သည့် လမ်းကြောင်း - ရွေးကောက်ပွဲ လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ် လိုက်လျှင် ပြည်သူတွေက မိမိတို့ (NLD) အပေါ် ဘယ်လို မြင်ကြမလဲ ဆိုသည့်ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ တထစ်ချ ပြောနိုင်သည်မှာ လက်တဆုပ်စာ တင်းမာသူတချို့မှအပ ပြည်သူက သြဘာပေးကြမှာ ဖြစ်သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဤလမ်းကြောင်းသစ်ကို NLD မပါဘဲနှင့် ပြည်သူက လျှောက်ပြသွားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံသစ် ဆန္ဒခံယူစဉ်က၄င်း၊ ရွေးကောက်ပွဲသစ်တွင် ၄င်း NLD က သပိတ်မှောက် ထားခဲ့လင့်ကစား သူတို့ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်လျှောက်လုံး ဆန့်ကျင် လာခဲ့ဘူးသည့် ပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်း (track record) ၏ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (consistency) ကို ဂုဏ်ယူချင် ယူနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း ပြည်သူနှင့်ကား တစ်သားတည်း ဖြစ်မနေ။ ပြည်သူ မလိုက်နိုင်အောင် မိမိကရှေ့ ရောက်နေသလား၊ မိမိကပဲ နောက်ကျ ကျန်ရစ်နေတာလား။
အစိုးရသစ်၏ ဒီမိုကရေစီအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားမှု (commitment) ကို စမ်းသပ်ကြည့်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းမှာ သူခင်းပေးသော လမ်းအပေါ် လိုက်နင်း လျှောက်ကြည့်ရန် ဖြစ်သည်။
ကတိတည်လျှင် ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်လာမည်။ ကတိမတည်လျှင် သူလိမ်နေတာ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ထုတ်နိုင်မည် ဖြစ်မည်။ ဘယ်ဘက်က တွက်တွက် အရှုံးမရှိနိုင်။
ခြေလှမ်း (၇) လှမ်း ပါဝင်သော လမ်းပြ မြေပုံ ကူးပြောင်းရေးသည် ယခုအခါ အဆုံးတိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ အုပ်စိုးသူများဘက်တွင် ကစားကွက် ကုန်နေပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာ့ အခြေအနေသည်လည်း လွန်ခဲ့သော ၂၃ နှစ် ကနှင့် အလွန်တရာ ခြားနားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တုံးက မရှိခဲ့သော အရာများအားလုံး ယခုမြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ မည်သူက မည်သူ့ကိုမျှ စိတ်ထင်သလို တဘက်သတ် ပစ္စလက္ခတ်ပြုမူ ဆက်ဆံရန်မဖြစ် နိုင်တော့။ ဤအချက်ကို အချိန်မှီ သဘောမပေါက်ကြလျှင် အားလုံးအတွက် ဘုံပျက်သုဉ်းရေး (common ruin) ကစောင့်လင့်နေသည်။
နိုင်ငံရေး လုပ်ဖေါ် ကိုင်ဖက်များသို့ သိန်းဖေမြင့်၏သင်ကြားချက်မှာ “တူတာတွေ တွဲလုပ် - မတူတာတွေ ခွဲလုပ်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အစိုးရသစ်တို့ အတွက်မူ “တူတာတွဲလုပ် - မတူတာတွေ ခဏဘေးချိပ်ထား” ဟူ၍ ဖြစ်သင့်သည်။ ဤသို့ ပြောရခြင်းမှာ ကနေ့ အခြေအနေသည် သိန်းဖေမြင့်တို့ ခေတ်ကထက် ဆိုးနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သမိုင်းဆိုသည်မှာ ခေတ်တစ်ခေတ်တွင အသက်ရှင် နေထိုင်သွားခဲ့ကြသူများက သူတို့ခေတ်တွင် သူတို့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်သည်များကို ဆောင်ရွက်ပေး သွားနိုင်ကြသလား/ မသွားနိုင်ကြဘူးလား ဆိုသည့် မှတ်တမ်း တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်သည်။
နှစ်ဘက်စလုံး ရင့်ကျက်ကြဘို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ ပြည်သူတွေက ‘သာဓု’ သုံး ကြိမ်စလုံး အပြည့်ခေါ်နိုင်ရန် စောင့်နေကြသည်။ လောလောဆယ်တော့ “တစ်ကြိမ်” ဘဲ ခေါ်နိုင်ကြသေးသည်။
၁၇ . ၈ . ၂၀၁၁ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
- ပြည်ပ​ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား​များ​ ပြန်လာကြရန် သမ္မတ ကမ်း​လှမ်း​ click
- ပြည်ပရောက်များ ပြန်လာရန်နှင့် လက်နက်ကိုင်များ လက်နက်ချရန် ဦးသိန်းစိန် ပြော click
- ပြည်ပရောက်သူတွေ ပြန်လာနိုင် click
- ပြည်​တော်ပြန်​ရေး​ သမ္မတမိန့်ခွန်း​ နိုင်ငံ​ရေး​အင်အား​စုများ ​ကြိုဆို click
- သမ္မတ၏ ပြည်တော်ပြန်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်မှုအပေါ် သူတို့အမြင် (အင်တာဗျူး) click
- သမ္မတက အဖွဲ့ပေါင်းစုံကို ခေါ်တွေ့ click
- သမ္မတ၏ လူစုံတက်စုံ တွေ့ဆုံပွဲ ... သို့သော် မေးမြန်းခြင်း ခွင့်မပြု click
- နောက် ၂ ပွဲ လုပ်ဦးမယ် ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း ဖိတ်မယ် click
- နေပြည်တော် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပါတီတွေကို ဖိတ် click
- စီး​ပွား​ရေး​ဖွံ့ဖြိုးမှု အလုပ်ရုံ​ဆွေး​နွေးပွဲ နိုင်ငံ​ရေး​ပါတီ​ခေါင်း​ဆောင်များ​နှင့်​ ပညာရှင်များ​ကို ဖိတ်ကြား​ click
- လူပြောများတဲ့ ပြည်ပမီဒီယာဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံ ဖယ်ရှား click
- ပြည်ပရေဒီယိုများကို ပုတ်ခတ်တဲ့ စာတမ်းများ နေ့စဉ်သတင်းစာများမှာ ဖယ်ရှား click
- VOA, BBC, RFA, DVB ရန်တိုက် သွေးထိုးခြင်း ရပ်ဆိုင်း click
- အမျိုးသားဆင့် အကောင်းဆုံးသတင်းဆု ပထမဆုံးပေးမည် click
အ​မေရိကန်အကြံ​ပေး​အဖွဲ့နှင့်​ နိုင်ငံ​ရေး​ပါတီများ​ ​တွေ့ဆုံ click
- လူ့အခွင့်​အ​ရေး​အထူး​ကိုယ်စား​လှယ် မြန်မာနိုင်ငံ သွား​မည် click
- မစ္စတာ ကင်တားနား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့မည် click
- ကချင်ပြည်တွင်း​ အစိုး​ရတပ် လူ့အခွင့်​အရေး​ ချိုးဖောက် click
- အကူအညီများကို မြန်မာအစိုးရ ပိတ်ပင်ဟု ကချင်ပြော click
- သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ KIO ဗဟိုကော်မတီ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် click
- KIO နှင့် ဆွေးနွေးပွဲနောက်ကွယ် မြန်မာစစ်တပ် အင်အားဖြည့်တင်း click
- အပြစ်မဲ့ ကလေးတဦးအား မြန်မာစစ်သားများ ပစ်သတ် click
- အစိုးရကို SSA-N ပြန်လည်စွပ်စွဲ click
- သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ နှစ် ၄၀ ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား ၀မ့်ဟိုင်းဌာနချုပ်၌ ကျင်းပ click
- ကရင်ဒေသ ထိုးစစ် ပိုများလာဖွယ်ရှိ click
- ကရင်နီပြည်တိုက်ပွဲ အစိုးရတပ်မှ ဒု-တပ်ကြပ် ကျဆုံးဟုဆို click
- ကရင်နီ တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနား တပ်စခန်းနှစ်ခုတွင် တပြိုင်နက် ကျင်းပ click
- စစ်ရှောင်နည်း နယ်စပ်တွင် လေ့ကျင့် click
- ထိုင်း​-မြန်မာနယ်စပ်တွင် စစ်​ဘေး​တိမ်း​ရှောင်မှု လေ့​ကျင့်​ခန်း​များ​ လုပ် click
- မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ တိုက်ပွဲ တိမ်ရှောင်ရေး ထိုင်းနယ်စပ်ဒေသခံများ အား ထိုင်းစစ်တပ် သင်တန်းပေး click
- ရှမ်းနှင့် ကချင်ခေါင်းဆောင်များ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တောင်းဆို click
- အစိုးရနှင့် အန်အယ်ဒီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုင်းရင်းသားများအတွက် မဖြစ်နိုင်သေး click
- ညီနောင် ၅ ပါတီမှ နှုတ်ထွက်ရန် မွန်ပါတီကို ဝန်ကြီးချုပ် ဖိအားပေး click
- နယ်ခြား​စောင့်​တပ်ဖွဲ့ဝင်များ​ ဘား​အံ​ဒေသခံများ​ထံ ​ငွေ​ကောက် click
- ပြည်ပ NGO များ၏ ကျန်းမာရေး အကူအညီကို လက်မခံရန် ချင်းအာဏာပိုင်များက သတိပေး click
- NLD က လူငယ်ပါတီဝင်များကို ဘန်ကောက်တွင် သင်တန်းပေး click
- အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ​ ထိုင်း​နိုင်ငံဘန်​ကောက် နိုင်ငံ​ရေး​သင်တန်း ​ပြီး​ဆုံး click
- ရေလုပ်သားများ အသက်အာမခံရရှိရေး ကြံ့ဖွံ့ အဆိုတင်မည် click
- မြန်မာတပ်မတော်အတွင်း နောက်ဆုံးအခြေအနေများ (ဆောင်းပါး) click
- မောင်ဖြူလွန်းနဲ့ တံလျှပ်များ click
- စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ အခွန်လျော့ကောက်မည် click
- ပြည်ပအလုပ်အကိုင်​အေဂျင်စီ​ကြောင့်​ ကိုရီး​ယား​နိုင်ငံ သွား​အလုပ်လုပ်မည့်​သူများ​ နစ်နာ click
- နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မှတ်ပုံတင်) အတွက် ငွေကျပ် ၅,၀၀၀ ပေးဆောင်ခဲ့ကြ click
- မော်လမြိုင်-ဘားအံ-ရွှေဂွန်း သံလွင်မြစ်တွင်းသင်္ဘော အရှုံးပေါ်၍ ရပ်နား click
- ကျပ်သိန်း ၂၀၀ တန် တွီးငိုချောင်းတံတား ရေလွှမ်းပျက်စီး click
- ချင်း​တောင်တွင် ​မြေပြိုသဖြင့်​ ​ကျေး​လက်​နေအိမ်များ​ ပျက်စီး​ click
- ဘာသာပေါင်းစုံ ကရုဏာရှင်များအဖွဲ့ ပဲခူး ရေဘေးဒုက္ခသည်များအား ကူညီမည် click
- ရခိုင်၏ စီးပွားရေးအရ အချက်အချာကျ နေရာများ လူမျိုးခြားများ လက်သို့ ရောက်ရှိနေ click
- ကျောင်းလှူပြီး ထိန်းသိမ်းစရိတ် မထောက်ပံ့သဖြင့် ကျောင်းသားများထံမှ ငွေကောက် click
- မြန်မာပြည်ထုတ် ဘီအီးအရက်သောက်သူ မီဇိုရမ်ရောက် ချင်းလူမျိုးနှစ်ဦး သေဆုံး click
- မူဆယ်က ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်မဆောင်းတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်သေးပါ (ပေးစာ) click
- ဒီမနက် ဖုတ်ဖရမြို့နယ်ထဲမှာ အဖမ်းအဆီးကြမ်း click
- Crossing Salween ဇာတ်ကား လော့စ်အင်ဂျလိစ်တွင် ပြမည် click
- ဆရာကြီး ဦးဦးသာထွန်းနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့အပြားတွင် ကျင်းပ click
- ဆရာမောင်သာချိုရဲ့ “နှလုံးသားလှပါစေ” စာပေဟောပြောပွဲ (အောင်လံမြို့) (အသံ) click
- Smuggling of Migrants အကြောင်း သိကောင်းစရာ (ဆောင်းပါး) click
- လန်ဒန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အဓိကရုဏ်းအပေါ် ကိုမိုးသီးဇွန် အမြင်များ click
- ထပ်စင်ပြန်ခေါ်ဖို့ ပရိယာယ် click
စစ်ရှောင်နည်း နယ်စပ်တွင် လေ့ကျင့် - ဧရာဝတီ click here
ကရင်ဒေသထိုးစစ် ပိုများလာဖွယ်ရှိ - ဧရာဝတီ click here
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွင်း နောက်ဆုံး အခြေအနေများ (ဆောင်းပါး) - ဧရာဝတီ click here
‘Crossing Salween’ ဇာတ်ကား လော့စ်အင်ဂျလိစ်တွင် ပြမည် - မဇ္ဈိမ click here
သမ္မတ၏ လူစုံတက်စုံ တွေ့ဆုံပွဲ ... သို့သော် မေးမြန်းခြင်း ခွင့်မပြု - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
ပြည်ပ NGO များ၏ ကျန်းမာရေး အကူအညီကို လက်မခံရန် ချင်းအာဏာပိုင်များက သတိပေး - ခိုနူမ်းထုန် click here
နောက် ၂ ပွဲလုပ်ဦးမယ် ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း ဖိတ်မယ် - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံသွားမည် - ဒီဗွီဘီ click here
ကချင်ပြည်တွင်း အစိုးရတပ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် - ဒီဗွီဘီ click here
ပြည်ပရောက်သူတွေ ပြန်လာနိုင် - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
လာထား ... နောက်ထပ် နှစ်ယောက် - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အင်န်အယ်ဒီ နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းသစ်များ - မိုးမခ click here
ဦးကျော်ဆန်း ပြုတ်မှာလား - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
ကင်တာနား မြန်မာနိုင်ငံ တနင်္ဂနွေ ရောက်မည် - ဘီဘီစီ click here
လူ့အခွင့်အရေး အထူး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး ကင်တားနား မြန်မာနိုင်ငံကို နောက်သီတင်းပတ် သွားမည် - ဗွီအိုအေ click here
လုပ်ငန်းရှင်တွေ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံဖို့ရှိ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ပြည် ပရေဒီယိုများကို ပုတ်ခတ်တဲ့ စာတမ်းများ နေ့စဉ် သတင်းစာများမှာ ဖယ်ရှား - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနများ အပေါ် ပုတ်ခတ်မှု အစိုးရသတင်းစာ ရပ်ဆိုင်း - ဗွီအိုအေ click here
ဒေါ်စုခရီးစဉ်အတွင်း အစိုးရပူးပေါင်းမှုအပေါ် အားရကြောင်း အမေရိကန်ပြောကြား - ဒီဗွီဘီ click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ် ကူည်ီတဲ့ အစိုးရ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် FTUB က ကျေးဇူးတင် - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
အမေရိကန် အကြံပေးအဖွဲ့ မြန်မာကို လာမယ် - ဘီဘီစီ click here
ကချင်ဒုက္ခသည်တွေကို ပြည်ပက မကူနိုင်အောင် ပိတ်ပင်ခံနေရ - ဘီဘီစီ click here
NLD က လူငယ်ပါတီဝင်များကို ဘန်ကောက်တွင် သင်တန်းပေး - မဇ္ဈိမ click here
မျှော်၊ မျှော် ကာ စောင့်ခဲ့ရတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး (ဆောင်းပါး) - မဇ္ဈိမ click here
သမ္မတက နေပြည်တော်တွင် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံမည် - မဇ္ဈိမ click here
မီဒီယာကို ဦးကျော်ဆန်း မျက်ရည်နဲ့ ပြောင်းတိုက်ပြီလား (ဆောင်းပါး) - ဧရာဝတီ click here
စစ်ထောက်ချုပ်နှင့် စစ်ရေးချုပ်တို့ကို ရာထူးချထား - ဧရာဝတီ click here
ဧရာဝတီ အတွက် လှုပ်ရှားမှုတခု - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီး သမ္မတ လိုက်လျောစေမယ် - ဘီဘီစီ click here
ဒေါ်စုနှင့်အစိုးရတွေ့ဆုံမှုမှ သုံးပွင့် ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်လာရန် မျှော် လင့်ချက်နည်း - KIC click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေက ပဲခူးတိုင်းအတွက် ထပ်မံကူညီ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ဦးအောင်ဆန်းဦးနှင့် မော်နီတာဂျာနယ်တို့အား တရားစွဲဆိုမှု ရုံးချိန်း စောင့်ဆိုင်းနေ - ဒီဗွီဘီ click here
စီးပွားရေး လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်မှုပိုင်း အားနည်း၊ လုပ်ငန်းကော်မတီတွေကို ထပ်မံဖွဲ့စည်းဖို့ သမ္မတ စီစဉ် - ဒီဗွီဘီ click here
အစိုးရတပ်က မွန်ဒေသခံပိုင် ရာဘာခြံနှင့် မြေကွက်များ အဓမ္မ သိမ်းယူ - ဒီဗွီဘီ click here
ပဲခူးမြစ်ရေကြောင့် လယ်မြေဧကထောင်ချီ နလန်မထူနိုင်အောင် ပျက်စီး - KIC click here
ကုန်သွယ်ခွန် ယာယီ ကင်းလွတ်ခွင့် အကျိုးဘယ်လောက်ရှိမှာလဲ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
မြစ်မင်းဧရာ ကယ်တင်ကြမည် - မိုးမခ click here
ဖက်ဒရယ်စနစ် (ဆောင်းပါး) - မဇ္ဈိမ click here
နယ်စပ်အရေး ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့် ထိုင်းတို့တွေ့ဆုံ - ဧရာဝတီ click here
အစိုးရသစ်လည်း မြေသိမ်း - ဧရာဝတီ click here
နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ဝယ်ဖို့ ရပ်ကွက်ထဲ ငွေကောက် - မဇ္ဈိမ click here
ကွန်တိန်နာဖြင့် ကားခိုးသွင်းမှုကို အရေးယူပြီ - ဧရာဝတီ click here
သြစီသတင်း၊ ဒါပေမယ့် --- - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်မရ - ဒီဗွီဘီ click here
၈ နာရီမှာ ပိတ် - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
လမ်းဘေးဈေးသည်များကို စည်ပင်က ဖမ်းပြီ - ဒီဗွီဘီ click here
အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၃) - ဦးသောဘိတ - မိုးမခ click here
မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း (စစ်ကိုင်း) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် သြဝါဒခံယူပွဲ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်းသို့ မန္တလေးမြို့ ကာယကံမေတ္တာရှင်အဖွဲ့မှ ထာဝရငွေပဒေသာပင် စိုက်ထူလှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနား - မိုးမခ click here
မေတ္တာပါရမီကျောင်းတိုက် ဒုတိယအကြိမ် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ - မိုးမခ click here
ဆရာမောင်သာချိုရဲ့ နှလုံးသား လှပါစေ စာပေဟောပြောပွဲ (အောင်လံမြို့) (အသံ) - နေ့သစ် click here
အမေ့အိမ် (ရုပ်သံ) - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
မြန်မာပြည်ထုတ် ဘီအီး အရက်သောက်သူ မီဇိုရမ်ရောက် ချင်းလူမျိုးနှစ်ဦးသေဆုံး - ခိုနူမ်းထုန် click here